वडाध्यक्षमाथि आक्रमणः खुट्टा भाँचियो, मोवाइल र सिक्री लुटियो – ई नेपाल न्युज
वडाध्यक्षमाथि आक्रमणः खुट्टा भाँचियो, मोवाइल र सिक्री लुटियो
सर्लाही । रामनगर गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष रामनरेश महतो माथि एक समूहले आक्रमण गरेका छ । सोमबार वडा कार्यालय जाँदै गर्दा रामनगर–४ उपेन्द्र रायको घरमा बसेका १५२० जनाको समूहले आफूमाथि आक्रमण गरेको उनले बताए ।
आक्रमणबाट वडाध्यक्ष महतोलाई टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ भने उहाँको बायाँ खुट्टा भाँच्चिएको छ । उनको सर्लाही अस्पताल मलङ्गवामा उपचार भइरहेको छ । स्थानीय श्रीनारायण राय र धरमेन्द्र साहको नेतृत्वमा आएका व्यक्तिले आक्रमण गरेको उनले बताए । आक्रमणकारीले वडाध्यक्षले प्रयोग गरेको मोटरसाइकसमेत तोडफोड गरेका छन् ।
उनको साथमा रहेको नगद, मोबाइल र सुनको हनुमानी समेत लुटी लगेको घाइते महतोले बताउनुभयो । उनी नेपाली काङ्ग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । घटनामा संलग्नको खोजी तथा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक पोषराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
प्रकाशित मिति: October 30, 2018 October 30, 2018 , संवाददाता: ई नेपाल न्युज
गोरूसिंगेमा बस र टिपर ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु
कस्तो छ प्रधानमन्त्रीलाई ? : शरीर सुन्निएको छ, अनुहार र छाती रातो छ
सुशासन कायम गर्न नसक्दा जनतामा नैराश्यता : रक्षामन्त्री
खेलकुद परिषद सदस्य सचिवमा पहिलो पटक महिलाको दाबी, शीर्ष नेताको समर्थन !
विप्लवको ‘बन्द’ सँग नडराउन प्रहरीको ढाडस